पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन पाउँदा… « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७४, शुक्रबार १३:४८
आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ !
होइन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र,
माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ !!
साउन २९ गते आइतबार, साँझ ७ बजे । काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित कोठामा एक्लै छु । आज दिनभरी मन विचलित भइरह्यो । छटपटी भइरह्यो । न कलेजमा पढ्ने मन लाग्यो, न रेडियोमा राम्ररी काम गर्ने मन नै लाग्यो । दिनभरी तराईसहित देशका विभिन्न भागमा आएको बिनासकारी बाढी र पहिरोबाट भएको जनधनको व्यापक क्षतिका समाचार सुन्दा, पढ्दा र हेर्दा अत्यास लागिरह्यो । मोबाइलमा फेसबुक खोले । फेसबुकका भित्ताभरी बाढी र पहिरोबाट अकालमा मृत्युवरण गरेका अभागीहरूका बडो मार्मिक तथा मुटु चुडिने तस्बिरहरू राखिएका छन् । पहिरोमा पुुरिएका एकै परिवारका लालाबाला, आमाबाबुका तस्बिरहरू । बाढीले डुबेका गाउँवस्तीहरू । यस्तो लाग्छ, मानौं तराई एकाएक जलकुण्डमा परिणत भएछ । ज्यान जोगाउन ओत लाग्ने ठाउँको खोजीमा भौतारिरहेका मानिस, जताततैं हाहाकार । हे, दैव तेरो कस्तो बिनासलीला !
फेसबुकमा केहीले विनित भावमा अपिल गरेका छन्– ‘तराई बचाऔं, सक्दो सहयोग गरौं ।’ सधैं तितो मात्रै सोच्ने र बोल्नेहरूले बाढीको बिनासको जिम्मेवार सरकारलाई बनाएका छन्– ‘मनलागी छुद्र भाषामा गाली गरेर आफ्ना कुण्ठा पोखेका छन् ।’ फेसबुकमा राखिएका स्टाटस, सन्देश तथा तस्बिर हेरिरहे । स्नातकोत्तर प्रथम वर्षका सहपाठी बिष्णु लामिछानेको स्टाटस देखे । उनले बाढीपीडितका लागि राहत संकलन गरिरहेको तस्बिर राखेका रहेछन् । एकाएक मेरा विचलित मन केही शान्त भयो । मैले तत्काल अठोट गरे– ‘मेरो देशका लाखौं नागरिक बाढी र पहिरोको त्रासदीमा छटपटाई रहेका वेला मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूको पीडामा मल्हम लगाउनु पर्छ । मुलुक बिनासकारी बाढीको चपेटामा परेका बेला म रमिते बनिरहनु हुँदैन ।’
मैले साथीहरूलाई फोन गरे । विभिन्न विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी आदि) मा आवद्ध विद्यार्थीहरूमध्येबाट केहीले स्वतन्त्र समूह बनाएर बाढीपीडितका लागि राहत संकलन कार्य अघि बढाएका रहेछन् । मैले पनि सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरे । साथीहरूले भन्नुभयो– ‘पूण्यको काम हो, स्वागत छ ।’ दिनभरी थकान एकाएक हरायो । बिचलित मन हल्का भयो । आफूमा स्फूर्ति आएको अनुभव गरे । म खाना पकाउने सुरसारमा लागे । ‘भोली पूण्य कमाउने काम गर्ने भए’ खाना खाएर यस्तै कल्पना गर्दै म निदाएँ ।
भोलीपल्ट, साउन ३० गते सोमबार । बिहान सबेरै निद्रा खुल्यो । आफूमा स्फुर्ती महसुस गरे । मलाई कतिबेला राहत संकलन गर्ने ठाउँमा पुगौं भन्ने लागिरह्यो । नित्यकर्म गरिवरी नास्ता गरे । आज मलाई बिहान लामो भएको जस्तो लाग्यो । म अफिस पुगे । केही समय काम गरेपछि मैले ‘राहत संकलनमा जाने’ भनेर छुट्टी मागे । र साढे ११ बजे क्याम्पसनेर आइपुगे । ६/७ जना साथीहरू आइसक्नु भएको रहेछ । अरू साथीहरूको समूह राहत संकलनका लागि गइसक्नु भएको रहेछ । हामी राहत सामग्री संकलनका लागि पाटनतिर हिँड्यौं ।
‘पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ । आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ । होइन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र । माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ’ राहत संकलन कार्यक्रम, स्वतन्त्र सहभागी यी पंक्तिअंकित व्यानर बोकेर हामी काममा जुट्यौं । हामी जाउलाखेल पुग्यौ र आठ जनाको समूह बनाएर राहत सामग्री संकलनमा लाग्यौं ।
तराईमा भएको बाढीको बिनासबारे प्राय: सबैलाई थाह छ । हामीले अनुरोध गर्‍यौं– हामी आरआर क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू बाढीपीडितहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर तपाईंहरूकहाँ आएका छौं । पुरै तराई बाढीबाट तहसनहस भएको छ । लाखौं मानिस बेघरबार भएका छन् । भोकभोकै छन् । अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा सबै बाढीले बगाएको छ । सक्दो सहयोग गर्नुहोस् ।
मानिसले धमाधम नगद, लत्ताकपडा, चाउचाउ, बिस्कृट, नमकिन दिन थाले । केही व्यक्तिले ‘कति सहयोग गर्नु ?’ भनेर पन्छिए । केहीले तितो पोखे– संकलन गरेको रकम र सामग्री आफैं खाने त होला, बाढीपीडितसम्म त के पुग्ला ? हामीले भन्यौं– हामी क्याम्पसका विद्यार्थी हौं । हाम्रो नाम, ठेगाना, फोन नम्बर लिनुहोस् । बल्ल उनीहरू हामीप्रति केही विश्वस्त भएको महसुस भयो ।
केही घन्टाभित्रै राहत सामग्रीको थुप्रो लाग्यो । प्राय: पसलले लत्ताकपडा प्रदान गरे । बाटोमा हिँडिरहेका मानिसले हामीले थापेको चद्दरमा पैसा फाले । हामी दिनभरी भोकप्यास बिर्सेर राहत सामग्री संकलनमा लागिरह्यौं । केही ठाउँमा हामीले देशभक्ति गीत प्रस्तुत गरेर पीडितहरूको दु:खकष्टमा ऐक्यवद्धता जनाउन आह्वान गर्‍यौं । आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व परेकोले कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठूलो भीड थियो । हामीले बोकेको व्यानर पढेर थुप्रै मानिसले चन्दा प्रदान गरे । साँझ पर्न थालेको थियो । हामीले संकलन गरेका सामग्री सबै एउटा गाडीमा राखेर आरआर क्याम्पस पुर्‍यायौं ।
आज मलाई जीवनमा धेरै ठूला पूण्यको काम गरेको अनुभव भयो । बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार, घाइते, विस्थापित सहितका पीडितहरूलाई सानो भए पनि सहयोग सामग्री जुटाउन पाएकोमा अपार सन्तुष्टि महसुस भइरहेको छ । हामीले करिब ३० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको राहत सामग्री संकलन गर्ने अठोट गरेका थियो । यो राहत सामग्री रौतहट जिल्लाका बाढी पीडितलाई प्रदान गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेका थियौं ।
हामी लगातार तीन दिनसम्म राहत संकलनमा जुट्यौं । पाटन, जाउलाखेल, बागबजार, पुतलीसडक, सुन्धारा, न्युरोड, महावौद्ध, भृकुटीमण्डप, लगायतका स्थानबाट लत्तकपडा, खाद्य सामग्री, रकम संकलन गर्‍यो । हामीले महिला, पुरुष र बालबालिकाका लागि संकलित लुगाकपडा छुट्याएर राख्यौ । त्यस्तै, औषधि, खानेकुरा र अरू सामान अलगअलग बोरामा प्याक गर्‍यौं, ता कि पछि वितरण गर्न सजिलो हो ।
हामी ५० जना भन्दा बढी विद्यार्थी अलग अलग समूह बनाएर राहत संकलनमा लागिरह्यौं ।
प्राकृतिक विपदा पहिले नै सूचना दिएर आउँदैन । विज्ञान प्रविधिले पूर्वानुमानसम्म गर्न सक्छ । तर, कति ठूलो प्रकोप आउँछ र कति जनधनको क्षति गर्छ भन्ने पहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन । अहिले मेरो देशको तराई बाढीमा डुबेको छ । जताततै जलमग्न छ । बाढी र पहिरोसंगै मानिसका आँसुका भेल बगेका छन् । घरपरिवार, आफन्त, धनसम्पत्ति गुमाएका लाखौ मानिस एकमुठी अन्न, एकसरो लुगा र एक गज ओभानो ठाउँको आशमा रहेका छन् ।
बाढी र पहिरोले गरेको बिनासका अनगिन्ती कथाव्यठा, तस्बिरले मन व्याकुल हुने नै भयो । हे ईश्वर, बाढीमा मृत्यु भएको अवोध बालकलाई गाड्ने ठाउँ नपाएर बाबुले कपडामा बेरेर पानीमै बगाएको तस्बिर पनि हेर्नुपर्‍यो । एक सय १३ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । उत्तिकै संख्यामा मानिस वेपत्ता भएका छन् । लाखौं मानिस घरबारबिहीन बनेका छन् । लाखौं हेक्टर जमिनमा लगाइएको अन्नबाली स्वाहा भएको छ । हजारौं पशुचौपाया बगेका छन् । जताततै बिनास नै बिनास । तीनचार दिनसम्म रेडियो, टेलिभिजन, अखबार, अनलाइनमा देशभरीका विभिन्न ठाउँका बाढी र पहिरोको बिनासका अत्यासलाग्दा कथाव्यथाहरू आइरहे । सिंगो मुलुक शोकमग्न अवस्थामा रह्यो ।
कुनै पनि ठाउँका नेपालीले यस्ता विपद् भोग्नु पर्दा अन्यत्रका नेपालीको मन दुख्नै पर्छ । दुई वर्ष अघि आएको महाभूकम्पको घाउँ अझैं आलै छ, त्यसैमा बाढीले बिनास गरेको छ । लाखौं पीडितहरू पीडाले छट्पटाइरहेका बेला हामी सबैका सहयोगी हातहरू एकजुट हुनै पर्दछ । अहिलेको यो बिनासकारी बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाएका सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइतेहरूको सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । घरबार गुमाउनु भएका तपाईंंहरू सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइको पीडामा हामी साथमा छौं ।
बाढी पीडितहरूका लागि राहत संकलनमा म सहभागी बन्न पाए । यसले मैले आफ्नो जीवन सफल भएको ठाने । तराईमा आएको बिनासकारी बाढीका पीडितहरूका लागि राजधानीसहित देशभरीबाट जसरी राहत संकलन भयो र सक्दो सहयोग गर्न जसरी मानिसहरू अग्रसर भए, त्यसले हामीले राजनीतिक स्वार्थका लागि जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, वर्णका आधारमा गरेका विभाजनका रेखाहरूलाई मेटाएको मैले अनुभूति गरे । विपद् पर्दा कोही कसैले मधेस भन्दैन रहेछ, हिमाल वा पहाड भन्दैन रहेछ । बाढीले तराई क्षतविक्षत बनाएको छ । जताततै शोक र पीडा मात्रै देखिन्छन् । तर, अहिले सिंगो मुलुक तराईको पीडामा मलम लगाउन जुरमुराएको छ । हृदयदेखि नै लाखौंलाख धन्यवाद छ, तपाईहरू सबैमा जसले हाम्रो तीन दिनसम्मको राहत संकलन कार्यक्रममा खुला हृदयले सहयोग रकम र सामग्री प्रदान गर्नुभयो । सबै स्वयंसेवक साथीहरूलाई धन्यवाद, कि मलाई पनि यो पूण्य कार्यमा सहभागी बनाउनुभयो । हाम्रो यो सानो प्रयासले केही परिवारको भोको पेटमा अन्न पुगोस, नाङ्गो आङ ढाकियोस्, बिरामीको मुखमा औषधिमुलो परोस् । सहयोगी सबैमा फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार !